Izindaba - Yiziphi iziphambeko ezivamile nezindlela zokwelashwa zemishini yokusika i-laser?
Lapho usebenzisa i- umshini wokusika we-laser, izinkinga zivame ukuvela ngenxa yesikhathi eside sokusebenzisa esiqhubekayo, indawo yokusebenza enothuli kanye nekhwalithi ephansi ye-opharetha. Yini okufanele ngiyenze uma kunezinkinga ezithile ezivamile?
Okokuqala, alukho uhlelo lokuqalisa okujwayelekile:
Ukusebenza kwephutha: isibani esikhulu senkomba yokushintsha amandla sicishiwe, isibani esikhulu senkomba yebhodi sicishiwe, iphaneli ayibonisi, ilambu lenkomba yemoto drive licishiwe, futhi umsindo wokubhaza ukhishwa emshinini.
Imbangela yenkinga: Isixazululo | Ukuthintana okungafanele kwamandla kagesi amakhulu, ukunikezelwa kwamandla kagesi okonakele, ukwehluleka kwephaneli yokulawula, ukwehluleka kwemoto drive, ukwehluleka komshini Opharetha angayixazulula igxathu negxathu.
Indlela ethile yokuhlola:
1.Buka ngamehlo izibani zesikhombi emshinini, bheka indawo enephutha, isibonisi esikhulu sokushintsha amandla asikhanyi, hlola ukuxhumana kwamandla kagesi akutholakali noma i-fuse yamandla kagesi ishaywa, ibhodi enkulu ye-LED ayikhanyi noma Iphaneli yokulawula ayibonisi, sicela uhlole i-DC 5V, Ingabe amandla kagesi angu-3.3V ajwayelekile futhi ukukhanya kwesikhombi somshayeli kucishiwe? ? Hlola ukuthi ukuphuma kwamandla kujwayelekile yini. Lapho uhlola ukuthi ukunikezwa kwamandla kuvamile yini, sicela unqamule noma iyiphi intambo yokukhipha ugesi ukuze uvivinye ukuthola ukuthi okuphakela ugesi noma into yokuhambisa ugesi inephutha.
2. Hlola ukuthi ngabe konke ukukhombisa kungokwejwayelekile yini. Uma uzwa umsindo ocacile, kungaba ukwehluleka kokusebenza. Bheka ukuthi inqola kanye nogongolo kuyadudulwa yini ngesandla. Smooth, noma ngabe kunezithiyo yini. Bona ukuthi ngabe kukhona yini okunye okukuvimbayo.
3. Bheka ukuthi ishafula lemoto lihlukene yini, ukuthi isondo lokuvumelanisa alikhululekile yini,
4. Bheka ukuthi ibhodi enkulu, ukunikezwa kwamandla, izintambo noma ama-plugs axhunywe ku-plug ye-drive block (idivaysi) axhumene kahle yini.
5. Hlola ukuthi isixhumi se-wire kusuka ku-drive block (idrayivu) kuya emotweni sinqamukile. Ucingo oluyisisekelo esingu-18 ukusuka ebhodini elikhulu kuye ebhodini elincane lonakele. Ukuthi kufanele kufakwe yini.
6. Hlola ukuthi izilungiselelo zepharamitha zilungile yini. Amapharamitha ngakwesobunxele ayafana, kepha uma ehlukile, kufanele alungiswe futhi abhalelwe umshini.
2. Akukho ukubonisa kuphaneli, futhi inkinobho ayikwazi ukwenziwa isebenze:
Isimo senkinga: Imbangela enkulu kunazo zonke ukuthi akukho okubonakalayo kuphaneli ye-boot, futhi okhiye abasebenza kahle noma abavumelekile.
Imbangela yenkinga: ukunikezwa kwamandla kwemodyuli yokulawula ukubonisa akujwayelekile, ukuxhumana kokulawula kubi, futhi iphaneli inephutha.
1. Qala kabusha umshini ukuze uhlole ukuthi isigxobo netrololi zisethwe kabusha ngokujwayelekile, futhi akukho zinyathelo ezithathiwe, futhi akukho zinyathelo ezithathiwe ukubhekana nephutha njengasekuqaleni.
2. Cindezela inkinobho yokusetha kabusha amandla, bese ucindezela izinkinobho zomcibisholo nokhiye bokusebenza kuphaneli yomshini ukuze uhlole ukuthi kujwayelekile yini, noma ngabe lezi zinkinobho zingasethwa kabusha ngokuzenzakalela nokuthi kukhona yini okungajwayelekile.
3. Bheka ukuthi isokhethi nesixhumi esikuyo inkomba yokuxhuma kukhululekile yini futhi akuthinti.
4. Faka esikhundleni sebhulokhi yokulawula yokubonisa, hlola ukuthi ngabe kukhona okuboniswayo, noma ngabe isibani sesikhombi ku-block block sivuliwe, noma ngabe ukunikezwa kwamandla kuvamile yini,
5. Faka ikhebula ledatha. Ibhodi eliyinhloko lilinganisa ukuthi ngabe i-P5 ibukhoma futhi i-voltage yi-5V. Uma kungejwayelekile, sicela ubheke ukukhishwa kwamandla kagesi we-5V, uma kungekho okukhiphayo, sicela ushintshele ku-5V ugesi.
6. Uma kunesikrini sokubonisa kodwa izinkinobho zingasebenzi, sicela ushintshe ifilimu yenkinobho ukuze ubone ukuthi ijwayelekile yini.
7. Uma namanje kungasebenzi, mane ubeke esikhundleni i-motherboard ukuze uvivinye.